Jose Mourinho oo soo xushay 3-da laacib ee ugu fiican edib taariikhda kubbada cagta…..(Messi iyo Ronaldo midkee ku jira?) – Gool FM
(Manchester) 19 Luulyo 2016. Tababaraha xaalad abuurka badan ee Jose Mourinho ayaa soo xushay saddex xidig uu aaminsan yahay malaha iyagaa ugu fiican taariikhda kubbada cagta adduunka.
“Aniga ahaan saddexda ciyaaryahan ee ugu fiican taariiikhda kubada cagta waa Pele, Maradona iyo Messi,” Jose ayaa ku jawaabay sidaa mar la waydiiyay fikirkiisa ku aadan saddexda ugu wacan adduunka kubbada cagta.
Jawaabta Jose ayaa durba qabsatay baraha bulshada oo xitaa wiilkiisa ayaa ka mid ahaa dadka Twitterka ku soo jawaabay.
Waxaana la xusuustaa in Jose uu mar ku tilmaamay bandhigyada Cristiano Ronaldo kuwa heer sare ah mar ay ka wada shaqeynayeen Real Madrid 2013 kolkaa uu Ronaldo noqday laacibka ugu fiican adduunka laakiin Jose uma joojin midaa oo wuxuu badelkiisa doortay Lionel Messi.
Haddaba sidee kula muuqataa xulashada Jose, Pele, Maradona iyo Messi ma yihiin saddexda ugu wacan taariikhda kubbada cagta adduunka.
DEPORTES: José Mourinho “Para mi Los 3 mejores jugadores de la historia son #Messi, #Pelé y #Maradona”pic.twitter.com/4jXZTYRmkk
— RADIO ATALAYA 680AM (@radioatalaya680) July 19, 2016
Lucas Digne oo ka hadlay sababtii uu ugu biiray Barcelona